Sida looga saaro barnaamijyada horay loogu rakibay Android | Androidsis
Ka saar barnaamijyada horay loo rakibay ee ku yaal Android, loo yaqaan boobka, had iyo jeer waxay ahayd (nasiib darose, waxay ahaan doontaa) dhibaato jirta oo xilligan wax soo saare ah oo diyaar u ahayn inay gebi ahaanba ka tirtiraan xarumaheeda. Nasiib wanaag, hawl wadeenadu waxay ka tageen dhaqankan nacaybka sanado ka hor maantana waa inaan la dagaalannaa oo keliya barnaamijka softiweerka.
Laakiin, kaliya ma aanan la kulmin dhibaatadaas Android, laakiin sidoo kale waa mid ku jira macruufka, maadaama Apple sidoo kale ku adkeysanayo sii wadida ku darista codsiyada aan qofna isticmaalin sida codsiga Mail ee boostada, Qoraalada Codka, Compass, Suuqa Suuqa ... Dabcan, xalka in laga takhaluso (runti lama tirtirin) codsiyada way fududahay ka badan Android.
Markaan ka hadlayno bloatware ama softiweer horey loo rakibay oo isticmaaleyaal badani aysan isticmaalin haba yaraatee, waa inaan ka hadlin oo keliya barnaamijyada ay soosaarayaashu rakibayaan, laakiin sidoo kale waa inaan ka hadalnoodas iyo mid kasta oo ka mid ah codsiyada Google ku dhejiyo kabaha kabaha mid kasta oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee suuqa ku gaadha Android.
1 Ka saar barnaamijyada horay loo sii rakibay ee Android adoo isticmaalaya ADB
1.1 Daar ikhtiyaarrada horumariyaha
1.2 Daar qaabka khaladka USB
1.3 Soodejiso barnaamijka ADB
1.4 Tirtir barnaamijyadooda
2 Ka saar barnaamijyada horay loo sii rakibay ee Android ee wata AppControl
3 Daar barnaamijyada ku jira Android adigoon ka baabi'ineynin
Ka saar barnaamijyada horay loo sii rakibay ee Android adoo isticmaalaya ADB
Muddo dhowr sano ah, soo saarayaasha badankood waxay ka hor istaageen adeegsadayaasha inay helaan nidaamka si ay u sameeyaan isbeddello ay ku rakibaan ROM-yada caadada ah ... Nasiib wanaagse, in aan lahayn rukhsad xidid ah oo laga helo boosteejooyinka ma aha wax dhibaato ah, maadaama aan haysanno habab kale oo noo oggolaanaya inaan qabanno isla hawsha: ka tirtir codsiyada horay loo rakibay ee ku yaal terminaalkeena.
Waxaan ubaahanahay oo kaliya barnaamijka soosaaraha Google ADB, oo ah codsi, iyada oo loo marayo amarrada fudud ee fudud, noo ogolaanaya inaan tirtirno mid kasta oo ka mid ah codsiyada aanan rabin inaan ku aragno qalabkeenna. Si aad uga saarto barnaamijyada horay loo rakibay adigoon raad ku reebin qalabkeena Android, waa inaan samee 4ta talaabo ee aan ku faahfaahiyey xagga hoose:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah awood fursadaha horumariyaha, maaddaama aan kuwan la shaqeynin, ma awoodi doonno inaan sameyno tallaabada xigta ee aan ku qasbineyno habka khaladka USB.
Si aad udhaqaajiso xulashooyinka horumariyaha ee Android, waa inaan marin ka helnaa meesha ay ku taal lambar dhis noocayaga ah Android. Macluumaadkan waxaa badanaa laga helaa nidaamka ama macluumaadka ku qoran taleefanka.
Haddii aadan ka heli karin xulashadan liiska, waad awoodi kartaa ka dhex hel sanduuqa raadinta waxaa laga helayaa dusha sare ee menu-yada, iyadoo ereyga "isku-duwidda" aan lahayn xigashooyinka.
Daar qaabka khaladka USB
Talaabada labaad ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah awood habka khaladka USB, Habka noo ogolaanaya inaan ku helno marin USB ah qeybta teendhada. Tallaabadan la'aan, barnaamijka aan adeegsan doonno waligiis awood uma yeelan doono inuu kula xiriiro aaladda.
Si aad udhaqaajiso qaabka khaladka USB, waxaan marin u helnaa Ikhtiyaarrada horumariyaha waxaa laga heli karaa nidaamka Nidaamka, waxaan raadineynaa qaybta Debugging oo aan dhaqaajineyno bedelka Dib u dhigga USB.
Soodejiso barnaamijka ADB
Tallaabada xigta, waa inaan kala soo baxno arjiga ADB tan isku xirka oo guji Sida loo Degsado Qalabka SDK Platform waayo, Windows / Mac o Linux waxay kuxirantahay nidaamka qalliinka aan adeegsano. Markii aan soo dejisanno, feylka ayaanu fureynaa (waxba looma rakibo)
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno, ka dib markaan qaadnay dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan, waa ku xir qalabkayaga kombuyuutarka. Waqtigaas, farriin ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda oo nagu martiqaadeysa inaan u oggolaanno khaladka USB-ga oo leh furaha RSA. Nidaamkani wuxuu u adeegaa si loo hubiyo in aan marin u leenahay aaladda, in qalabku runtii annagaa leh.
Marka xigta, waxaan fureynaa daaqada amarka ee nidaamkayaga qalliinka oo aan marin u marinnaa meeshii aan ka soo dejisanay ADB si aan u bilowno hawsha noo oggolaan doonta ka saar barnaamijyada xididka qalabkayaga adoon ka tagin wax raad ah.
Kadib waxaan ku qoreynaa qadka taliskas "adb shell pm packages packages" oo aan lahayn xigashooyinka si loo muujiyo liis ay ku qoran yihiin dhammaan codsiyada lagu rakibay kombuyuutarkayaga.
Marka aan helno magaca arjiga aan rabno in aan tirtirno, waxaan qori "adb shell pm uninstall -k –user 0 package-name" ayadoon la soo xiganin. Waa inaan ku beddel magaca xirmada magaca arjiga aan rabno inaan ka saarno, taas oo kiiskan uu yahay xayeysiis.boxer.app.
Ka saar barnaamijyada horay loo sii rakibay ee Android ee wata AppControl
Ikhtiyaar ka fudud, oo keliya loo heli karo Windows, ayaa ah in la isticmaalo barnaamijka xakamaynta barnaamijka 'ADB App Control', codsi rku beddel interface amarka mid daaqadaha ah, halkaas oo aan si deg deg ah uga dooran karno codsiyada aan dooneyno inaan ka saarno qalabkeena.
Si loo isticmaalo codsigan, waa inaan marka hore Daar ikhtiyaarrada horumariyaha y Daar qaabka khaladka USB, sidaan ku sharaxnay qaybtii hore.
Dhaqaajiso xulashooyinka horumariyaha
Si aad udhaqaajiso xulashooyinka horumariyaha ee Android, waa inaan marin ka helnaa meesha ay ku taal lambar dhis (Nidaamka / Macluumaadka macluumaadka taleefanka) ee noocayaga ah 'Android' oo riix dhowr jeer illaa farriin ay xaqiijinayso inaan si sax ah u hawlgalnay xulashooyinka soo-saareyaasha.
Marka aan dhaqaajino xulashooyinkaan, ayaan kala soo baxnaa barnaamijka Xakamaynta ADB App, codsi in xilligan la joogo waxaa kaliya loo heli karaa WindowsSidaa darteed, ma adeegsanaysid nidaamkan hawlgalka, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato habka xariiqda taliska ee lagu sharxay qaybta hore.
Markaan soo dejisanno arjiga, kuna xirnay qalabkeena Android kombuyuutarka oo aan fulinno. Codsiga ADB App Control waa fulin oo waxaa ku jira dhammaan faylasha lagama maarmaanka u ah inay shaqeeyaan, markaa kumana rakibi doono kombuyuutarkeena.
Markii aad bilowdo markii ugu horeysay, soo degsan doonaa taxane ah faylal iyo astaamo ee codsiyada si loo soo bandhigo macluumaadka qaab garaafyo badan oo faahfaahsan.
Codsiga wuxuu ku tusi doonaa menus Ingiriis ah, luqad aan ka beddeli karno dusha sare ee arjiga, dhagsii xarfaha ES si aad u muujiso dhammaan luuqadaha la heli karo, oo ay ka mid yihiin Isbaanishka ayaa lagu daray, sida aan ku arki karno sawirrada soo socda.
Si aad uga saarto barnaamijyada aaladdayada, waa inaan ka dhex laallaabnaa daaqadda oo dhammaan barnaamijyada aaladdayada lagu soo bandhigo, iyaga xulo oo aad safka midig.
Qormadan, waxaan ku xulannaa Ka tirtir sanduuqa xulashooyinka, Waxaan calaamadeyneynaa xulashada Hayso xogta iyo keydka (si looga saaro dhammaan xogta dalabka) oo guji Uninstall.
Farriin ayaa la soo bandhigi doonaa oo na ogeysiin doonta haddii aan ka saarno wax codsi ah nidaamka, waxaa laga yaabaa in nalagu qasbo inaan dib u soo ceshano aaladda, taas oo tilmaamaysa in la lumiyo mid kasta oo ka mid ah xogta aan kaydsanay. Guji Haa.
Haddii aan rabno inaan dib u soo ceshanno codsiyadaas ka dib marka la tirtiro, codsigu wuxuu nagu casuumayaa inaan sameyno nuqul amniga ah. Waa lagugula talinayaa laakiin qasab maaha.
Markaad gebi ahaanba ka saarto barnaamijyada, farriin qaabeyn ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa barnaamijka.
Daar barnaamijyada ku jira Android adigoon ka baabi'ineynin
Tani waa howsha fudud marka laga saarayo codsiyada nidaamkayaga, laakiin waxay ka tagtaa raadad, sidaa darteed waxaan ka heli karnaa tuuryo barnaamijyada aan ka saareyno kumbuyuutarkeena inta aan isticmaaleyno boosteejadayada, toobiyeyaasha nagu casuumaya inaan mar kale rakibno barnaamijka.
Inkasta oo ay tahay ikhtiyaarka ugu fudud, waxay ka tagaysaa raad taas ah waxaan si fudud u heli karnaaSidaa awgeed, waa ikhtiyaarka ugu horreeya ee la heli karo fudeydkiisa laakiin ugu yaraan lagu taliyay haddii aan dooneyno inaan gebi ahaanba iska ilowno codsiyada ay soo saaruhu ku rakibayaan dhammaan qalabkooda.
Si loo joojiyo codsiyada ku jira Android, waa inaan marin u helnaa dejinta aaladahayaga, guji Aplicaciones oo dooro arjiga aan rabno in aan daminno. Kala xulashada dalabka, ikhtiyaarka ayaa la soo bandhigi doonaa Uninstall / Disable.
Haddii doorashada Disable waa la cawday, tani lama heli karo, sidaa darteed ikhtiyaarka kaliya ee wax loo dejin karo waa iyada oo la adeegsanayo arjiga ADB iyada oo loo marayo khadka amarka (oo laga heli karo Windows, macOS iyo Linux) ama la adeegsado arjiga ADB AppControl, oo ah codsi kaliya oo loo heli karo Windows.
Dhammaan hababka aan kugu tusay qodobkaan waxay noo oggolaanayaan inaan gebi ahaanba ama qayb ahaan ka baabi'inno codsiyada aaladdayada, codsiyada taas Mar labaad ayaa la heli doonaa haddii aan dib u soo celino qalabkeenna.
Tani waa sababta oo ah marka hawsha la fulinayo, nidaamka ayaa soo celiya ROM-kii uu keydiyay oo leh nooca ugu casrisan ee nidaamka qalliinka illaa aan ka soo celinno nuqul hore ee nidaamka qalliinka kan soo saaraha ROM-kiisa.
Dariiqa kaliya ee lagu baabiin karo barnaamijyada horay loo sii rakibay waligood aaladeena moobiilka waa sidii hore, adoo beddelaya ROM-ka qalabka, waa wax, xaddidaadda soo saarayaasha awgeed sinnaba uma qaban karno, ugu yaraan qalabka ugu dambeeyay.
Adoo adeegsanaya ROM ka duwan kan ay soo bandhigtay soo saaraha, waxaa ku jira oo keliya codsiyada uu abuurahoodu ku soo daray. Haddii aad haysato qalab jira dhowr sano oo aad rabto inaad siiso fursad labaad, ka saarista codsiyada horay loo rakibay maahan xalka aad raadineyso, maadaama waxa aad u baahan tahay ay tahay rakibi ROM ku habboon qalabkaaga si dhammaystiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida looga saaro barnaamijyada horay loogu rakibay Android